Ku-deeqaha billaha ah noqo - Cunnooyinka Lugaha
Noqo Bixiye Bille ah
Markaad sameysid tabarucaad bil kasta soo noqnoqda, waxaad sameysaa ballanqaad waara oo ku saabsan gaarsiinta cunnooyinka caafimaadka qaba waayeelka maxalliga ah, taasoo u oggolaanaysa inay si madax-bannaan ugu noolaadaan guriga. Ku noqoshada deeq bixiye joogto ah waa hab fiican oo lagu caawiyo hubinta xasilloonida iyo wax ku oolnimada barnaamijyada Cuntada ee Gawaarida.
Noqoshada deeq bixiye waara waa fududahay! Si fudud u qor qaddarka aad jeclaan lahayd inaad ku tabarucdo oo ay la socdaan macluumaadkaaga lacag-bixinta, waxaanan si otomaatig ah u soo dalici doonnaa kaarkaaga deynta bil kasta. Marka lagu daro inaad waqti kaydiso, lacagtaadu waxay sii socotaa deeq bixiye waaraya maxaa yeelay waxay yareyneysaa kharashaadka maamulka ee la xiriira dirista iyo waraaqaha.
Adiga ayaa dooranaya xaddiga aad jeclaan lahayd inaad ka qaybgasho iyo nala soo xiriir wakhti kasta haddii aad jeceshahay inaad wax ka beddesho ku deeqaada. Halkan guji si aad hadda ugu deeqdo ama naga soo wac (612) 623-3363 si aad u noqotid deeq bixiye waara maanta!
Ku deeqo Cunnada Wheels-ka oo ka caawi sidii loo hubin lahaa in waayeelka guud ahaan magaalooyinka Mataanaha ah ay u helaan nafaqada iyo is-dhexgalka bulshada ee ay ugu baahan yihiin inay si madax-bannaan ugu noolaadaan.